THAILAND TOUR FOR MYANMAR TOURISTSCHIA
THAILAND TOUR FOR MYANMAR TOURISTSCHIANG MAI - CHIANG RAI - MAE HONGSON
Myanmar Speaking Tour Guide
မင်္ဂလာပါရှင်/ခင်ဗျာ.....destinythai.com ၀ဒ်(ပ်)ဆိုက်မှ ကြိုဆိုပါတယ်...
ကျွန်ုပ်တို့၏ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုသည် ခရစ်နှစ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သော အတွေ့အကြုံများဖြင့် ဒေသခံ ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ခရီးသည်များအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း ခရီးစဉ်များဖြစ်သော- တောင်တန်းများ၊ ဂူများ ၊ သဘာဝ ပင်လယ်ကမ်းခြေများ၊ စေတီပုထိုးများ နှင့် ခေတ်မီကုန်တိုက်များ ပါဝင်သည့် ခရီးစဉ်များစွာ ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ခရီးသည်များ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နေ့ရက်၊ အချိန်၊ နေရာ များပြောင်းလဲ လိုပါက အသေးစိတ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ခရီးသည်များမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းလာသည် ဖြစ်စေ ၊ အစုအဖွဲ့ ၊ ကျောင်းအဖွဲ့ ၊ ကုမဏီအဖွဲ့အစည်း များဖြင့် လာသည်ဖြစ်စေ ... ခရီးသည်၏ လိုအပ်ချက်များကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ၀န်ဆောင်ပေးနေပါပြီ။
ဆောင်ပုဒ်- "သင်၏ ကျေနပ်ပျော်ရွင်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပျော်ရွင်မှု ဖြစ်ပါသည်"
ထိုင်းလူမျိူးများသည် မြန်မာဘုရင် ဘုရင့်နောင်မင်းအား လေးစားကြည်ညိုပြီး ရုပ်ရှင်ကားကြီးများကို အဖန်ဖန် ဖန်တီးလာကြသည်။ ထိုဇာတ်ကားမှ ဘုရင့်နောင် မင်းကြီး၏ စစ်စွမ်းရည်ထက်မြက်မှု နှင့် အမိနိုင်ငံ ချစ်မြတ်နိုးသောစိတ်ဓါတ်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။
ဘုရင့်နောင်မင်း၏ အထုပတိဇာတ်ကား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း
ခရစ်နှစ် 1558-1774 ခုနှစ် ဘုရင့်နောင်မင်း အုပ်စိုးခဲ့သော ထိုင်းနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းမြို့တော် - ချင်းမိုင်မြို့၌ နှစ်ပေါင်း၂၀၀ ကျော်တွင်းကျန်ရှိခဲ့သော ရိုးရာယာဉ်ကျေးမှု အနည်းစု
1. ဘာသာရေးဆိုင်ရာ စေတီ ကျောင်းတော်များ
2. ချင်းမိုင်မြို့မှ မြန်မာရပ်ကွက်
ယခုလက်ရှိချိန်တွင် မြန်မာမှ ၀င်လာသော မြန်မာလုပ်သားများအပြင် ယခင်ချိန်က အချိန်ကြာညောင်းစွာနေထိုင်ခဲ့သော မြန်မာများအပါအ၀င် လူဦးရေများစွာရှိသော ထာ့ဖဲလမ်း
3. မြန်မာဗျည်း နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအထက်ပိုင်း ဗျည်းဆင်တူပုံ
4. မြန်မာအစားအစာ မှ ဆင်းသက်လာသော ထိုင်းနိုင်ငံအထက်ပိုင်း (လမ်းနား) အစားအစာ
ဟင်းလေး - ထိုင်းလူမျိူး နှင့် ဆစ်ဆောင်ပန်းနားလူမျိူးများ ကြိုက်နှစ်သက်မှုခံရသော ဟင်းလျာ (ချဉ် ပြီး ငန်သော အရသာ)
နမ့်ဖစ်အောင် - မြန်မာနိုင်ငံသား မောင်အောင်မှ ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့် နမ့်ဖစ်အောင်ဟု ခေါ်ဆို
ခနုံကျင်း နမ်းနှင်း - နမ့်ဖစ်အောင်မှ အသား၊ သွေးခဲ နှင့် မုန့်တီ ပါဝင် ပေါင်းစပ်ထားသောဟင်း
ခေါက်ကန်းကျင်း - သွေး ကို စပလင်ဖြင့်ရောညစ်ကာ ထမင်းနဲ့နယ်ပြီး ဖက်ဖြင့် ထုတ်ခြင်း
ချင်းမိုင်မြို့လည်ခေါင် ထာ့ဖဲလမ်း မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးဆိုင် "ဆရာမောင်"... ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာမိသားစုများဆက်ခံထားသော ဆေးဝါးဖော်စပ်နည်း
TC. 1 ချင်းမိုင် အိမ်မက် ခရီးစဉ်
အရေအတွက် : ခရီးသည် ၂ ဦး
ခရီးစဉ်အမျိူးအစား: သီးသန့် ခရီးစဉ်
ကြာချိန်: ၃ ရက် ၂ ညအိပ်ခရီး
ဈေးနှုန်း : 124 USD - 430 USD
ချင်းမိုင်မြို့၏ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ခရီးစဉ် – The သမိုင်းဝင် ဟောခန်း, Doi Suthep ကျောင်းတော်, အရပ်ဒေသဈေး ,KhanToke ထိုင်းရိုးရာညစာ, Sankampaeng ရေပူစမ်း, Chiang Mai ညဈေးတန်း or Night Bazaar.
TB. 1 စွဲမက်စရာ ဘန်ကောက်ပါ
ခရီးစဉ် အမျိုးအစား : ကိုယ်ပိုင်
ကြာချိန် : ၃ ရက် ၂ ညအိပ်ခရီး
ဈေးနှုန်း : 221 USD - 334 USD
ထိုင်းနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှ အောက်ပိုင်းသို့ ရထားဖြင့်သွားခြင်း...လမ်းတစ်လျှောက်တွင် လှပသော စိုက်ခင်းများ၊ ထိုင်းလူမျိူးများ၏ စားဝတ်နေရေး ကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဘန်ကောက်- ဖက်ထယား ရထားလိုင်းသည် တင်္နလာ -သောကြာနေ့ ထိ နေ့တိုင်းရှိပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာနေ့ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
TS. 1 ပင်လယ်ပြာ သဲသောင်ပြင် နေရောင်ခြည်နဲ့ ဖက်ထယား
အရေအတွက်: ခရီးသည် ၂ ဦး
ခရီး အမျိုးအစား : ကိုယ်ပိုင်
ဈေးနှုန်း : 225 USD
အားလပ်ရက်တွင် လှပသော အနုပညာလက်ရာ ၊ ပင်လယ်ပြာ၊ အရောင်စုံသော သန်တာကျောက်တန်းများ နှင့် ဖက်ထယားလူမျိုးများ၏ စားဝတ်နေရေး ကိုလေ့လာနိုင်ပါသည်၊ ညအချိန်တွင်လည်း ထူးဆန်းသော ပြပွဲများကိုလဲ ရှုစားနိုင်ပါသည်။
TC.2ချင်းမိုင် - ချင်းရိုင်း - မယ့်ဟောင်ဆွန်
ခရီး အမျိုးအစား: သီးသန့် ခရီ
ကြာချိန်: ၇ ရက် ၆ ညအိပ် ခရီး
ဈေးနှုန်း: 409 USD - 703 USD
ထိုင်းနိုင်ငံအထက်ပိုင်း (လမ်းနား) စတိုင် အလှအပများဖြင့် လည်ပတ်ခြင်း ...လူမျိုးနွယ်စုများ၏ ကွဲပြားသော ရိုးရာဝတ်စုံများ၊ စိမ်းလန်းသောတောင်ပေါ် ဒေသရှုခင်းများ ဖြင့်ကျော်ကြားသော ထိုင်းနိုင်ငံအထက်ပိုင်း ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
TS.2၄ P - ဖူးခက် ဖီးဖီး ဖန်းယား ဖငှား
ကြာချိန်: ၃ ရက် ၂ညအိပ်ခရီး
ဈေးနှုန်း : 220 USD - 325 USD
ဖူးခက်မြို့သည် လှပသော သဘာဝ ပင်လယ်ပြာ အပြင် မြို့တွင်း အနုပညာလက်ရာ များနှင့် ကျော်ကြားပါသည်။
The paradise of Chiang Mai Trip3Days/2 Nights trip for Myanmar Tourists
The paradise of Chiang Mai Trip3Days/2 Nights trip
TS. 1 Pattaya Sea Sand Sun3Days/2 Nights trip
TB.2Bangkok – Pattaya4Days/3 Nights trip
TB. 1 Charming Bangkok3Days/2 Nights trip
TC.2Chiang Mai – Chiang Rai – Mae Hong Son7Days/6 Nights trip